Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Daaweynta Kuleylka Dabka Warshadaha | Shiinaha Warshadaha Daaweynta Kulaylka Kuleylka
Saxanka kululaynta Graphite
Graphite wuxuu leeyahay astaamo wanaagsan oo ah iska caabinta heerkulka sare iyo kuleylka kuleylka, waana isha kuleylka wanaagsan. Xaashida Graphite-ka waxaa lagu kululeeyaa dardaaran, taas oo ah habka ugu weyn ee kululaynta foornada heerkulka sare.
Nidaamka wax soo saarka ee foornada faakiyuumka, walxaha garaafku wuxuu ku guuleystay suuq ballaaran oo dalab ah sababtoo ah sifooyinkiisa gaarka ah. Qaybaha garaafka ee ku jira foornada faaruqinta waxaa ka mid ah: Kaarboon kuleylka kuleylka laga dareemo, ul kululeynta garaafka, garaafka hagaha sariiraha foornada garaafka, biiyaha hagaha garaafka, hagaha garaafka, qaybta iskuxirka garaafka, tiirka garaafka, sariirta foornada garaafka garaafka leh, garaafka garaafka, lowska garaafka iyo alaabooyinka kale.
Daaweynta kuleylka foornada warshadaha
Foornada warshadaha waa nooc ka mid ah qalabka isticmaala kuleylka loo beddelay tamarta korantada si loo kululeeyo qalabka ama qaybaha shaqada ee wax soo saarka warshadaha. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa soo-saarka iyo tijaabinta dhoobada, metallurgy, elektaroniga, galaaska, warshadaha kiimikada, mashiinada, diidmada, horumarinta qalabka cusub, qalabka gaarka ah, qalabka dhismaha, jaamacadaha iyo machadyada cilmi baarista.